Bagonyuluke ngezinselelo abanazo abesifazane
ABESIFAZANE bacobelelane ngolwazi emcimbini obizwa nge-Embracing Our Scars
NONTUTHUKO NGUBANE | August 29, 2019
ABESIFAZANE babhoboke ngezinselelo ababhekana nazo kwezothando nasemindenini yabo emcimbini wabesifazane obizwa nge-Embracing Our Scars.
Lo mcimbi obuse-Imperial Hotel, eMgungundlovu ngeledlule bekuhlangene abesifazane bezogubha inyanga yabo.
Umcimbi ubuhlelwe uNksz Nomfundo Msomi ngaphansi kwenhlangano iWomen of Worth Movement.
Umsunguli nomhleli wephephabhuku iWomanity Magazine, uNksz Gugu Mpungose, obekhuluma kulo mcimbi, uthe ukusheshe ahlukanise umshado esemncane kwamenza wabona ukuthi wayengene emshadweni enezinkinga eziningi ayengazange abhekane nazo ngqo. “Ngahlukumezeka ngisemncane, ngenza sengathi kudlulile. Ngithe sengishadile umyeni wami elokhu ekhala ngokuthi ngiyahluleka ukumthanda. Lokhu ngicabanga ukuthi kwakwenziwa nokuthi angizange ngibe naye ubaba empilweni yami, ngangingalazi uthando lomuntu wesilisa. Lokhu ngaze ngakubona sengihlukanisile umshado wami ukuthi kuningi engingazange ngibhekane nakho ngqo okwakungihlupha,” kusho uNksz Mpungose.
UNksz Mpungose ubekhuluma ngaphansi kwesihloko sokuba umama okhulisa izingane eyedwa.
Uthe njengoba esehlala nezingane zakhe kwaba semqoka ukuba uyise wezingane zakhe amvumele ukuba abe nobudlelwane nezingane zakhe.
Uthe kumele amaphutha abazali abawenza ekukhuliseni bona, bangawaphindi ezinganeni zabo. “Noma ngabe uyise wengane senihlukene kodwa ingane kusemqoka ukuba ixhumana noyise. Nawe njengomzali kusemqoka ukuba ungazikhethi izingane kodwa uzinakekele zonke ngokwezidingo zazo.”
Umbhali wencwadi ethi: Self Assured Woman: Woman of worth, uNksz Nelly Shozana, ugcizelele ukubaluleka kokuzithemba kowesifazane othandweni.
“Ukuzithemba ungowesifazane yikhona okubalulekile ebudlelwaneni ngoba kukunikeza isibindi sokushiya phansi uma uhlukumezeka noma ungakutholi ukujabula. Kumele wazi ukuthi yini oyifuna othandweni, ungagcini usuthandana nanoma ubani ngoba ufuna ukuba nesoka nje,” kusho uNksz Shozana.
Uthe abesifazane abaningi bazibuza ukuthi bayoke bamthole yini umuntu ongenasici bese behlalela ukuhlukunyezwa.
Usomabhizini uNksz Zoh P. Mashabane, onenkampani eqeqesha abanye osomabhizini, iRZD Coaching & Training, uthe kusemqoka ukuba abesifazane bangazitheli ngabandayo, banganciki emholweni owodwa kodwa bangene kwezamabhizinisi.
Uthe kumele baqale babheke ukuthi yini abayithandayo nabangakwazi ukuyenza.
Uqhube wathi inkampani yakhe isiza kakhulu ukucushisa labo abasuke befuna ukuphemba amabhizini.
UNksz Msomi uthe inhloso enkulu yalo mcimbi ukuba abesifazane bacushisane baphinde bakhulisane kwezothando, kwezamabhizinisi nakwezithinta umndeni.